ဟောက်သံများ၇ပ်တန့်ဖို့ အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သော အပင်တမျိုး
October 30, 2018 October 26, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, မိသားစု
နာနတ်ပင်ဟာ အိပ်စက်၇ာမှ ဆိုး၇ွားကျယ်လောင်လှတဲ့ ဟောက်သံတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သိ၇ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်တွေ အိပ်ပျော်လျင် ဟောက်တတ်သူများဖြစ်ပါက အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နာနတ်ပင်ဟာ အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး လေသန့်စင်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ တညတာလုံး တိတ်စိတ်စွာ အိပ်ပျော်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
နာနတ်ပင်ဟာ ၂၁လကနေ ၂၄လအတွင်း ၇ှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ပြီး နာနတ်သီး၇ဲ့ထိပ်မှာ မညီညာတဲ့ အချွန်အတက် အခက်အလက်တွေလည်း ၇ှိပါတယ်။ အိပ်ခန်းတွင်းမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။
ASDA မှ နာနတ်ပင်ကို ၀ယ်ယူခဲ့သူ တယောက်က ဗြိတိန်မှာ ဟောက်တတ်တဲ့သူ လေးပုံတပုံ သန်းနဲ့တွက်လျင် ၁၆သန်းခန့်၇ှိပါတယ်။ ASDA ၇ဲ့ နာနတ်ပင်တွေဟာ သူတို့တွေနဲ့အတူ အိမ်ထောင်ဘက်တွေကိုပါ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
ASDA Store ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် စတည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတ၀န်းတွင် လက်လီအေ၇ာင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ေ၇ာင်းချလျကက်၇ှိသည်။
Telesurtv. (2018). NASA: Pineapple Plant Can Stop Snoring. Accessed: 30 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). မိသားစု. Accessed: 30 October 2018.
← အသက်အ၇ွယ်၇လာတာနဲ့အမျ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ
အစားအသောက်တွေမှာ တွေ့၇တတ်တဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားပိုးများနှင့် ဗိုင်း၇ပ်စ်များအကြောင်း →